Falanqaynta Kulamada UEFA Europa League: Arsenal Vs Olympiacos, Shakhtar Donetsk Vs Roma, Iyo,
HomeFalanqeynta KulamadaFalanqaynta Kulamada UEFA Europa League: Arsenal Vs Olympiacos, Shakhtar Donetsk Vs Roma, iyo,
March 18, 2021 Falanqeynta Kulamada, Horyaalada Kale, Wararka Ciyaaraha 0
Kulamo ka tirsan koobka UEFA Europa League ayaa la ciyaaridoonaa iyadoo kooxda Arsenal ay gurigeeda ku soo dhaweeneyso kooxda Olympiacos, labada kooxood ayaa lugti hore ku soo kala baxay 1-3 oo Arsenal ku soo badisay.
Tartanka UEFA Europa League
Arsenal:- Arsenal waxaa ka maqnaan kara da ‘yarka tayada leh ee Bukayo Saka, iyadoo ciyaaryahanka reer England uu dhaawac ku seegayo. Taas ka sokow ma jiraan arrimo la og yahay oo dhanka dhaawaca ah Mikel Arteta ayaa la filayaa inuu heysto koox buuxda oo taam ah.
Shaki: Bukayo Saka
Olympiacos:- Dhanka kale, maamulaha Olympiacos Pedro Martins ayaan awoodi doonin inuu u yeero adeega rugcadaaga dhexe ee reer Greek Avraam Papadopoulos, daafaca dhexe ee reer Portugal Ruben Semedo iyo garabka Griiga Mario Vrousai. Waxaa jira shaki ku saabsan helitaanka daafaca dhexe ee reer Senegal Ousseynou Ba.
Dhaawac: Ruben Semedo, Mario Vrousai, Avraam Papadopoulos
Shaki: Ousseynou Ba
11 kulan oo dhex maray labada kooxood . Arsenal ayaa badisay lix kulan shanna waa laga badiyay.
Arsenal ayaa laga badiyay mid kasta oo ka mid ah labadii kulan ee ay gurigeeda kula ciyaartay Olympiakos, mid ka mid ah tartamada UEFA Champions League xilli ciyaareedkii 2015-16 iyo mid kale tartankan xilli ciyaareedkii hore – Arsenal waligeed lagama badin seddex kulan oo isku xigta garoonkeeda koox ka soo horjeedda tartamada Yurub.
Youssef El-Arabi oo ka tirsan Olympiakos ayaa raadinaya inuu shabaqa soo taabto seddex kulan oo isku xigta oo UEFA Europa League ah oo ay la ciyaaraan Arsenal, iyadoo labadii gool ee uu ka dhaliyay Gunners ilaa iyo haatan (seddexdii kulan ee ay ciyaareen) ay u dhigantaa 50% wadarta guud ee tartanka (4).
Kulamada kale ee la ciyaaridoono
Garoonka Stadion NSK Olimpiyskiy, Kyiv
Shakhtar Donetsk:- Luis Castro ayaa heysta koox inta badan taam ah oo uu ka soo xusho, iyadoo Maksym Malyshev iyo Taras Stepanenko ay yihiin kuwa kaliya ee dhaawac ku maqan.
Tababaraha Shakhtar ayaa shaxdiisa isku shaandheyn ku sameeyay shaxdiisa kulankii Desna, waana inuu dib ugu laabtaa bilowga uu jecelaa.
Dhaawac: Maksym Malyshev, Taras Stepanenko
Roma:- Paulo Fonseca ayaa helay war xun dhawaan madaama Henrikh Mkhitaryan uu garoomada uga maqnaan doono seddex ilaa afar isbuuc dhaawac kubka ah. Chris Smalling iyo Juan Jesus ayaa weli ka maqan daafaca. Roger Ibanez ayay u badan tahay inuu sii wadi doono daafaca inkasta oo uu qaab ciyaareed liita soo bandhigay kulankii Parma.
Borja Mayoral ayaa laga yaabaa inuu booska hore ka bedelo Edin Dzeko, gaar ahaan tan iyo markii Giallorossi ay kulan adag wajaheyso Napoli kulanka soo socda.
Dhaawac: Henrikh Mkhitaryan, Chris Smalling, Juan Jesus, Jordan Veretout, Nicolo Zaniolo
Garoonka Stadion Maksimir
Dinamo Zagreb:- Sadegh Moharrami ayaa weli ah walwalka kaliya ee la ogyahay ee laga qabo kooxda Dinamo ka hor kulankaan.
Dhaawac: Sadegh Moharrami
Tottenham Hotspur:- Spurs ayaa weendoonta Giovani Lo Celso kulankaan, iyadoo ciyaaryahanka reer Argentina uu weli dhaawacan yahay. Son ayaa sidoo kale qarka u saaran inuu ku seego kulanka dhaawac muruqa ah oo kasoo gaaray kulankii Arsenal. Pierre-Emile Hojbjerg ayaa ganaax ku seegaya kulankaan.
Dhaawac: Giovani Lo Celso, Son Heung-min
Ganaax: Pierre-Emile Hojbjerg